N D Lama : NepalChurch.com
नेपाली बाइबल iPod, iPhone, iPadमा कसरी हाल्ने?
[ 8 ] July 27, 2016	| N D Lama
खुशीको खबर अब नेपाल बाइबल सोसाइटीको बाइबल तपाईले आफ्नो फोनमा पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ।
असल कार्य गरे शत्रुले पनि कदर गर्दछ। हिन्दु धर्मालम्बीहरू, बुद्धिष्ट धर्मालम्बीहरू र अन्य धर्मालम्बीहरू हाम्रो शत्रु होइनन्। औलामा गन्न सकिने केही भतुवा हिन्दुवादीहरूले मेडियामा विरोध जनायो भन्दैमा हामीले हरेस खाने कुरै हुन्न। साह्रा हिन्दु मित्रहरूमा उहाँहरूको जस्तो गैह्र जिम्मेवारी स्वभाव छैन। उहाँहरूले बास्तवमा हिन्दु अस्तित्वको वदनाम गरीरहनुभएको छ। आफ्नो स्वार्थ पूर्तीकोलागि कहिले गरीवको काँध चर्ने […]
आदरणीय पास्टर अगुवाहरू तथा ख्रीष्टका जनहरू तपाईले आफ्नो दाँतको सुरक्षा गर्नुभएन भने तपाईको हासो वा मुस्कान गुम्छ त्यसरी नै सत्यको सुरक्षा गर्नुभएन भने तपाईको स्वतन्त्रता गुम्छ। सत्यलाई जोगाइ राख्नकोलागि मेरो चर्चमा (आशा चर्च, लुइभील केन्टुक्की) आजदेखि (अगस्ट ४) एउटा अध्ययन श्रेणी सुरू हुन लागेको छ। जसलाई टेवा पुराउन ती पाठहरूको छोटो भिडियोहरू पनि तयार पारिने […]
कतिपय मानिसहरूले इसाइ मतलाई पैसाको आरोप लगाउँछन्। “गरीबलाई बेचेर” जस्ता लान्छानाहरू लगाउँछन्। के गरीव पनि बेच्ने चीज हो र? के गरीब iPod हो र सबैले खोजी खोजी किन्ने? गरीबलाई किनेर कहाँ बेच्न जाने? वास्तव मै भन्ने हो भने गरीबलाई किन्ने बस्तुसँग दाज्न मिल्दैन। तर पनि मैले माने कि गरीब बेच्ने चीज हो, अब भन्नुहोस् विकसित […]